स्ट्रोक के हो ? | OB Media
स्ट्रोक के हो ?
नवराज कट्टेल | ३० चैत्र २०७७, सोमबार १८:०१
स्ट्रोक एक चिकित्सा आपतकालिन हो। यो तब हुन्छ जब दिमागमा रगत आपूर्ति गम्भीर सम्झौता गरिएको छ वा अचानक काटिएको छ। नतिजा स्वरूप, मस्तिष्क कोषहरू अक्सिजन र पोषक तत्वहरूको अभावका कारण मर्छन्। स्थायी क्षतिको परिणाम हुन सक्छ यदि रगत प्रवाह तुरुन्त पुनःबहाली गरिएको छैन। यदि रगत प्रवाह कोशिका मृत्युको एक महत्वपूर्ण मात्रामा आउनु भन्दा पहिले पूर्वावस्थामा ल्याइएको छ भने, तपाईं मात्र क्षणिक लक्षणहरू अनुभव हुनेछ। यो अवस्थालाई ट्रान्जियन्ट इस्केमिक अट्याक वा ूमिनी स्ट्रोकू को रूपमा चिनिन्छ। यद्यपी टीआईए सौम्य अवस्था होइन। यो एक चेतावनी संकेत हो कि तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक छ । किनकि यो द्रुत रूपमा पूर्ण विकसित भएको स्ट्रोकमा विकसित हुन सक्छ।
स्ट्रोकका लक्षणहरू के के हुन् ?
स्ट्रोकका बिरामीहरूले प्रायः आफैंले मेडिकल सहायता खोज्दैनन्, किनकी उनीहरू पीडामा नपर्न सक्छन् वा केही गलत भएको छ भनेर उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। प्रायः परिवारका सदस्य वा साथमा आएका व्यक्तिहरू लक्षणहरू देख्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। बिरामी विभिन्न लक्षणहरूबाट पीडित हुन सक्छ जस्तै :
अस्पष्ट बोली वा बोल्न कठिनाई ।
शरीरको केही भागहरू सार्न असमर्थता ।
अनुहार, हात वा खुट्टा को सुन्नपन ।
मुखको एक पट्टि झर्ने ।
एक वा दुबै आँखाले हेर्न कठिनाई ।
हिंड्न र सन्तुलन गर्न कठिनाई ।
चक्कर आना, बेहोश हुनु ।
स्ट्रोक भारी छ भने बिरामीहरूले चेतना गुमाउन सक्छ।
बिभिन्न प्रकार के हुन् ?
त्यहाँ दुई प्रकारका स्ट्रोक छन् :
इस्केमिकः ईस्केमिक स्ट्रोक हुन्छ जब रगतको थक्काले मस्तिष्कलाई रगतको आपूर्ति रोक्दछ। यो क्लट मस्तिष्कको रक्तवाहिकाहरू भित्र गठन गर्न सकिन्छ वा थक्का मस्तिष्क बाहिर गठन हुन सक्छ, मुख्यतया हृदय र ठूला जहाजहरूमा, जुन मस्तिष्कमा परिक्रमणको माध्यमबाट बगेर जान्छ। सबै स्ट्रोक को बारेमा ८५ प्रतिशत इस्केमिक स्ट्रोक हो।
रक्तस्राव। हेमोर्याजिक स्ट्रोकमा, मस्तिष्कको रक्तवाहिनाहरू फुट्छ र मस्तिष्क कोषहरूमा रक्तस्राव हुन्छ र मस्तिष्क कोषहरूको मृत्यु हुन्छ। कम नियन्त्रणमा हाइपरटेंशन र ब्रेन एन्यूरिज्म (रक्त वाहिकाको भित्तामा नराम्रो सेरोफेरोको बलूनिंग जसले यसलाई कमजोर र फुट्ने प्रवृत्तिको बनाउँछ) हेमोरेजिक स्ट्रोकको दुई सबैभन्दा सामान्य कारणहरू हुन्।
रक्तस्राव स्ट्रोकको अन्य कारणहरू रगत पातलो (एंटीकोआगुलेन्ट्स) र रगत अराजकको साथ ओभरट्रेमेन्ट हुन् जसले कम प्लेटलेटहरू निम्त्याउँछ हेमोर्याजिक स्ट्रोकलाई थप इंट्रापरेन्काइमल ब्लीड र सबराक्नोइड ब्लीडमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जुन बिभिन्न तरिकाले उपचार गरिन्छ र फरक रोगनिदान हुन्छ।
स्ट्रोकको लागि जोखिम कारक के हुन् ?
स्ट्रोकको जोखिम बढाउने जोखिम कारकहरू जोखिम कारकहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ जुन तपाईंको हृदयघातको खतरा बढाउँदछ। यी जोखिम कारकहरूलाई परिमार्जनयोग्य र गैर–परिष्कृत जोखिम कारकहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ। परिमार्जन योग्य जोखिम कारकहरू नियन्त्रण गरेर, स्ट्रोकको ५० प्रतिशत रोक्न सकिन्छ।
परिमार्जित जोखिम कारक :
जीवनशैली कारकहरू ः अधिक वजन र मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, भारी रक्सी र कोकेन र एम्फेटामिन, सिगरेट धूम्रपान जस्ता अवैध लागूऔषधको प्रयोग।
चिकित्सा जोखिम कारक : उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल, अवरोधक निन्द्रा श्वसनक्रिया, मधुमेह र अन्य हृदय रोगहरू।
गैर परिमार्जित जोखिम कारक :
बुढ्यौली ५५ बर्षसम्म रोक्न सकिन्छ । पुरुषहरू महिला भन्दा बढी जोखिममा छन् :
तपाई स्ट्रोकको उपचार कसरी गर्नुहुन्छ ?
स्ट्रोकको व्यवस्थापन स्ट्रोकको प्रकारहरूमा निर्भर गर्दछ। इस्कीमिक स्ट्रोकको उपचार मस्तिष्कमा रगत प्रवाहलाई छिटो पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले हो। यो ूक्लट बस्टिंगू ड्रग्स इंजेक्शन लगाएर प्राप्त हुन्छ यदि तपाई लक्षणहरू सुरु भएको २४ घण्टा भित्र अस्पताल पुग्नुहुन्छ भने। यदि अधिक समय बितिसकेको छ भने, तपाईंको पूर्ण रिकभरीको संभावना नाटकीय रूपमा कम हुनेछ। स्ट्रोकको थप जोखिम कम गर्न तपाईंलाई एस्पिरिन दिइनेछ। डाक्टरहरूले भविष्यको स्ट्रोकको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले संकुचित धमनीहरू खोल्नको लागि क्यारोटिड एन्डार्टेक्ट्रोमी, बेलुन एंजियोप्लास्टी र स्टेंट प्लेसमेन्टहरू जस्ता अन्य प्रक्रियाहरू सिफारिस गर्न सक्छन्।
रक्तस्राव स्ट्रोकको उपचारले रक्तस्रावलाई नियन्त्रण गर्न र मस्तिष्क भित्र बनाउने कम दबावमा केन्द्रित छ। दवाव कम रक्तचाप रोक्न को लागी दिईन्छ। यदि क्षेत्र ब्लीडिंग ठूलो छ, रगत हटाउन र दबाव कम गर्न मस्तिष्कमा नै शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ। यदि रक्तस्राव एनीरिजमबाट हो भने, एन्यूरिज्म हटाउन शल्यक्रिया गरिन्छ। सबाराक्नोइड रक्तस्रावमा, रक्त नलीहरूको थप स्पास्म रोक्नको लागि निमोडिपिन भनिने औषधि दिइन्छ।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, यदि तपाईं ूमिनी स्ट्रोकू अनुभव गर्नुहुन्छ भने तपाईंले तत्काल मेडिकल हेरचाह आवश्यक छ।
पुनर्वास र शारीरिक उपचार स्ट्रोक केयर का एक अभिन्न हिस्सा हो। स्ट्रोकको बिरामीमा प्रायस् सास फेर्ने, निगलने कठिनाई ,ब्यालेन्सगर्ने र दृष्टि पाउन समस्या हुन्छ। कठोर पुनः स्थापनाले महत्वपूर्ण पुनस् शक्ति प्राप्त गर्दछ र कार्यहरू पुनस् प्राप्ति गर्न सक्दछ। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन एक मल्टि डिस्प्लेनरी दृष्टिकोण हो जुन न्यूरोलॉजिस्ट, नर्स, डाएटिसियन, फिजियोथेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट र मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सक समावेश गर्दछ।
स्ट्रोकले शरीरको एक पक्षमा कमजोरी वा पक्षाघात हुन सक्छ, र यसले समन्वय र सन्तुलनको साथ समस्या निम्त्याउन सक्छ।
धेरै व्यक्ति स्ट्रोक पछि पहिलो हप्तामा अत्यधिक थकान ९थकान० अनुभव गर्दछन्, र निद्रामा पनि कठिनाई भोग्न सक्छ, तिनीहरूलाई अझ थकित बनाउँदछ।
तपाईंको पुनःस्थापनाको अंशको रूपमा, तपाईंलाई एक फिजियोथेरापिस्टले देख्नुपर्दछ, जसले उपचार योजना बनाउनु अघि कुनै पनि शारीरिक अशक्तताको हद मूल्यांकन गर्नेछ। फिजियोथेरापी प्रायस् हप्तामा धेरै सत्रहरू समाहित गर्दछ, व्यायाम जस्ता क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै तपाईंको मांसपेशि शक्ति सुधार गर्न र कुनै हिड्ने कठिनाइहरू पार गर्न।
फिजियोथेरापिस्ट लक्ष्यहरू तय गरेर तपाईंसँग काम गर्दछ। सुरुमा, यी साधारण लक्ष्यहरू हुन सक्छन्, जस्तै कुनै वस्तुलाई उठाउँदै।
जब तपाईंको अवस्था सुधार हुन्छ, अधिक माग दीर्घकालीन लक्ष्यहरू, जस्तै खडा वा हिंड्ने, सेट हुनेछ। केयर वर्कर वा करियर, जस्तै तपाईंको परिवारको सदस्य, तपाईंको फिजियोथेरापीमा संलग्न हुन प्रोत्साहित हुनेछ। फिजियोथेरापिस्टले तपाईंलाई दुबै साधारण व्यायामहरू सिकाउँदछ जुन तपाईं घरमा गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंसँग आवागमन र केही क्रियाकलापहरू जस्तै समस्याहरू छन्, जस्तै नुहाई(लुगा धुनु, तपाईं एक व्यवसायिक चिकित्सकबाट पनि मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले कुनै पनि कठिनाइहरू प्रबन्ध गर्न र जीवनको गुणस्तर र काममा फिर्ता परिवर्तन गर्न मद्दत सक्दछन्।
थ्रेसरबाट आगोलागी हुँँदा २० लाख बराबरको क्षती
विराटनगरमा ११ सहित प्रदेशमा २५ कोरोना संक्रमित थपिए